Guadalest, obodo nrọ nke dị na mpaghara Alicante | Akụkọ Njem
Guadalest bụ otu n'ime obodo kachasị iche ma maa mma na Mpaghara Alicante. Ọ dị na mpaghara nke Marina Baja, onye isi obodo ya bu Villajoyosa, ma ọ nweghị ụsọ oké osimiri. Kama nke ahụ, ọ dị n'elu ugwu ma gbaa ya gburugburu ebe kachasị mkpa dị elu dị ka Sierra de Aitana ife nke ihe Xortà.
Kwusara Mgbanwe nke Historical-Artistic na 1974, Guadalest bụkwa akụkụ nke netwọk nke Obodo kacha mma mara mma na Spain. Ọ bụ site na nnukwu ụlọ ya, ịgagharị n'okporo ámá ya dị warara nke ụlọ ọcha na ịga na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ga-enye gị ahụmịhe pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata nke ọma The Castell de Guadalest, dị ka a na-akpọ obodo a n'ezie, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Ihe ị ga-ahụ na Guadalest
1.1 Nnukwu ụlọ nke Guadalest
1.2 Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere
1.3 Lọ Orduña
1.5 Muselọ ihe ngosi nka nke Guadalest
2 Ihe a ga-eme n’obodo Alicante
3 Ihe ị ga-eri na Guadalest
4 Otu esi aga obodo
5 Kedu oge kacha mma iji gaa Guadalest
Ihe ị ga-ahụ na Guadalest
Ewezuga ịnụ ụtọ ọmarịcha echiche ndị enyere ya echiche, na Guadalest ị nwere ọmarịcha ihe nketa na ohere ịme ihe ndị ọzọ. Anyị ga-egosi gị ihe ị ga-ahụ n'obodo Alicante.
Nnukwu ụlọ nke Guadalest
A na-akpọkwa ya obí eze san jose, bụ ebe ewusiri ike nke ndị Alakụba ochie na narị afọ nke XNUMX. N'ịbụ nke dị n'akụkụ kasị elu nke obodo ahụ, ọ nwere nnukwu usoro dị mkpa n'oge emepechabeghị. Agbanyeghị, ala ọma jijiji abụọ na ọgba aghara dịka Agha nke Nnwere Onwe kpatara ọnọdụ ya ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe. Agbanyeghị, ị ka nwere ike ileta ozu ya.
Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere
Wuru na narị afọ nke XNUMX na-eso canons nke baroque, Ọ tara ahụhụ mebiri emebi nke mere ka iweghachi ya na 1962 iwepu cupola ya na transept ya. N'ime ha gosipụtara otu ihe dị oké ọnụ ahịa ebe ịchụàjà onye ulo oru mebere Jose Maria Moya na onye na-ese ihe David pastọ. Dị ka aha chọọchị ahụ na-egosi, ọ na-anọchi anya Annunciation na ndụ Jizọs Kraịst.
Ọ bụ nnukwu ụlọ dị na Guadalest. E wuru ya mgbe ala ọma jijiji 1644 gasịrị ma kpọọ ya aha ezinụlọ Orduña, bụ ndị chịrị obodo ahụ ruo narị afọ atọ. Ọ bụ ugbu a isi ụlọ ọrụ nke a ọchịchị Museum Ọ na-egosipụta arịa ụlọ nke narị afọ nke iri na itoolu, ihe osise nke narị afọ nke XNUMX, mkpokọta seramiiki, map, foto ndị ochie na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, na ala ala nke Guadalest Town Hall ị nwekwara ike ịga leta otu ụlọ mkpọrọ ochie nke narị afọ nke iri na abụọ nke na-eduga anyị ịgwa gị banyere ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie n'ihi na e nwere otu ihe eji egwu egwu.
Muselọ ihe ngosi nka nke Guadalest
Yana nnukwu mma nke a Alicante obodo, ị ga-iju anya nke ego nke chọ ihe ngosi nka awaara onye obia. Anyị ekwuolarị Oge ochie, ya na ihe mmekpa ahụ ya na Casa Orduña. Ma e nwere ndị ọzọ ọbụna ihe ijuanya karị.
Ọ bụ ikpe nke microgiant ngosi nka, nke ị nwere ike ịhụ thumbnails dị ịtụnanya. Ọmụmaatụ, Goya's 'Ogbugbu nke Mee Abụọ' na ọka osikapa, oke ehi wuru n'isi ntụtụ ma ọ bụ akpụrụ akpụ nke nnwere onwe n'ime anya agịga. Niile bụ ihe okike nke onye na-ese ihe Manuel Usa, weere otu n'ime microminiaturists kachasị mma n'ụwa.
Ọ dịghị obere ọchịchọ ịmata bụ Muselọ ihe ngosi nka Betlehem na Dollhouses nke ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe ochie ụmụaka na ebe obibi ọmụmụ ọmụmụ. A pụkwara ikwu otu ihe ahụ ụlọ ihe ngosi nka nke nnu na ose, nke nwere ihe karịrị puku iri abụọ, ụfọdụ n'ime ha sitere na 1800 afọ gara aga.
N'aka nke ọzọ, dokwara mara mma bụ Nolọ ihe ngosi nka nke agbụrụ, nke na-emegharị ndụ nke ndị bi na ndagwurugwu Guadalest n'oge gara aga. Ekike ndị a na-ahụkarị, arịa ụlọ na arịa maka iji kwa ụbọchị mejupụtara ihe ndị egosiri na ebe a.
Ime ụlọ nke Orduña
N'ikpeazụ, nke Ihe ngosi nka ihe omuma nke ugbo ala Ọ na-egosi gị ọgba tum tum 140 na vintage ụgbọala n'ime ụlọ mara mma. Ga-ahụ ebe a ọtụtụ mpempe akwụkwọ ndị ọzọ gara aga dịka igwe eji akwa akwa, ekwentị, redio na ndị na-eme kọfị.
Ihe a ga-eme n’obodo Alicante
Ke adianade eleta ya ncheta na ngosi ihe mgbe ochie, na Alicante obodo bụ a zuru okè n'ebe ndị trekking. Ọtụtụ ụzọ malitere n'okporo ámá ya. Dịka ọmụmaatụ, nke na-agbago Nzukọ Xortà gafere Cerro de los Parados. Ma obu nke na-eduga na Castell de Castell.
Bothzọ abụọ ahụ na-eso ụzọ njegharị ruo Loma del Blocón, ma mgbe ahụ onye na-aga na Isi iyi mmiri, mgbe nke ọzọ rutere n’elu hotara Castell de Castells, ebe ị pụrụ ịhụ ihe Mpaghara Arcs na ọgba osise nke Pla de Petracos.
Ihe ị ga-eri na Guadalest
Mgbe ụzọ ụkwụ ndị a siri ike, agụụ ga-arụ ọrụ. N'ime obodo nke Valencian Community ị nwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-enye gị ụdị nri ha.
Offọdụ n'ime ha bụ osikapa na turnips na agwanke ose juru, nke rabbit ali oli na Akwụkwọ nri. Ike dị ike bụ ozi ọma, nke nwere ọka wit, anụ ezi, poteto, eyịm, tomato, ogwu na agwa, ha niile esi n’ite ọdịnala.
Maka akụkụ ya, nke mincho bụ ụdị Pizza nke nwere inine, azụ na pịkụl, mgbe bọọlụ ọka Ha dị ka bọọlụ anụ, ọ bụ ezie na ha enweghị anụ mana poteto esi, achịcha na akwa.
Otu esi aga obodo
Ọ bụ ezie na enwere ahịrị bọs nke ruru obodo Alicante, ụzọ kachasị mma iji ruo ebe ahụ bụ ụgbọ ala. Ọ bụrụ na ị si na benidorm ma ọ bụ site na Alcoy na Cocentaina, okporo ụzọ ị ga-agarịrị bụ Ihe ngosi CV-70. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị si Altea mee njem, ụzọ kachasị mma bụ Ihe ngosi CV-755.
Kedu oge kacha mma iji gaa Guadalest
Mpaghara Guadalest nwere ihu igwe nke ụdị Mediterenian, na obere oge oyi na ọkọchị na-ekpo ọkụ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na obodo ahụ dị n’elu ugwu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita isii ma gbaa ugwu gburugburu, ihu igwe dị ntakịrị. Ya mere, oge oyi ya na-ajụ oyi ma oge ọkọchị na-atọ ụtọ karị gbasara ọkụ.
Ya mere, oge kachasị mma iji gaa na Guadalest bụ ndaeyo. Ke adianade do, ke ufọt ufọt August ha ememme na nsọpụrụ nke Nwa agbọghọ nke echiche, nke obodo ji eme ihere.
Na mmechi, Ihe kacha mma nwere ọtụtụ ihe inye gị. Ọ bụ obodo mara mma nke dị n'elu ugwu ma nwee nnukwu ụlọ ya ma nwee ọmarịcha ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ọdịdị ala. Ọ bụrụ n ’ihe a niile ị gbakwunye ọmarịcha gastronomy, ị nwere ihe niile iji mee ka nleta gị bụrụ ọmarịcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihe kacha mma